ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ရှူးပေါက်သူများ သတိထား”
I watched this before. Also Chinese Premier Wen Jiabao also encountered this at Cambridge University. Here is the link
ရာဇ အိနြေ္ဒတို့ ရာဇပရိယာယ်တို့ ဆိုတာ မလွယ်ပါလားလို့ တွေးမိတယ်။ ဖိနပ်နဲ့ ပေါက်ရင်တောင် ပြုံးပြီး ရွှတ်နောက်နောက် နေနိုင်မှ... (ဘုရ်ှကို ရည်ညွှန်းပါသည်။)
ကိုပေါပြောတဲ့ထဲမှာ စိတ်ကူးနဲ့ ပေါက်ချင်နေတဲ့သူတွေတော့ မပါဘူး မဟုတ်လား။
စိတ်ကူးနဲ့ ပေါက်နေတ.ဲ Rita and Mar Mar ကတော့ earliy morning on the bed ? :P
ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူအဟောင်းပဲကိုး နော်။ ရီတာ့ပို့ စ်နဲ့ ကွက်တိပဲ။
I'm staying in Am Qasr,Iraq when the case happen.
But, I had gone nothing places in Iraq due to prohibit by local authority.
I dont think he is as nervous as you said.
ဟုတ်ပါ့ဗျား။ ချက်ချင်းကို ၀ဋ်လည်တာပဲနော်။
စကားမစပ်“ကူညီချင်လွန်းသူ” သွားဖတ်လိုက်တယ်။ ဟုတ်ပါ့ဗျား။ မှန်ပါ့ဗျား လို့ပဲ ပြောလိုက်တော့မယ်။
ကိုပေါတယောက် ဆီးလမးကြေင်းရောဂါတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပညာပေးတဲ့ ပို့စ်တွေများ တင်ထားလားလို့ လာဖတ်ကြည့်တာ တလွဲစီဖြစ်နေတယ်။
၁ပတ်ကို ၃-၄ပုဒ်တော့တင်ပါ နေ့တိုင်းလာကြည့်ပြီ: အသစ်မတွေ့ရင် ရင်ဆို့ရလို့
ကိုပေါ...ဒီပို့ စ်လေးကို ကျနော်သိမ်းထားမယ်ဗျ..။
အားကြီးရေးတတ်တဲ့ လူ..။း)
Anonymous go thoutMyinKatThu said...
ကိုပေါရေ။ မျှဝေပေးတဲ့ စာတွေ အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီ Anonymous ဆိုတဲ့ အကောင်ကတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း စာကောင်းပေကောင်းမရေးတတ်ဘူး။ သူများရေးတဲ့စာတွေ လိုက်ပီး အပုပ်ချနေတဲ့ အကောင်.. ပုဆိုးခြုံထားလျက်က မျက်နှာဖုံး ထပ်စွတ်ထားတဲ့ အကောင်ပဲ။ ကြည့်လိုက်ရင် နေရာတကာမှာ အဖက် သရော်စာတွေချည့်ပဲ။ ဒီလို လုပ်ဘို့ မင်းကို ဘသူက လုပ်ခပေးခိုင်းထားလဲ။